Norway oo xudeeda xirtay: Garoomada diyaaradaha iyo dekadaha oo dadka laga celin doono. - NorSom News
Norway oo xudeeda xirtay: Garoomada diyaaradaha iyo dekadaha oo dadka laga celin doono.
Reysulwasaaraha dalkan Norway, Erna Solberg oo daqiiqado kahor soo gaba-gabeysay shir jaraa´id oo ay qabatay ayaa sheegtay in dowlada Norway ay xirtay xuduudaheeda, gaar ahaan garoomadaha diyaaradaha iyo dekadaha
Waxeyna reysulwasaaruhu sheegtay in dhamaan dadka raba inay Norway soo galaan, lagu celin doono xuduuda, loo diidi doono inay wadanka soo galaan. Si loo yareeyo fiditaanka cudurka Corona-virus.
Reysulwasaaraha ayaa dhanka kale ka codsatay dadka Norway degan ee ku maqan wadamada dibadda, ee raba inay dalka kusoo noqdaan, ay la xiriiraan shirkadaha diyaaradaha, ayna qorsheeyaan qaabkii ay guryahooda ugu soo noqon lahaayeen.
Dadka raba inay wadanka ka baxaan ayay sidoo kale dowladu ka codsatay inay iyagu iskood masuul uga yihiin la xiriirista shirkadaha diyaaradaha, iyo helista xogta ah in loo ogolaan doono galista wadanka ay u socdaan. Waxaana dadka laga codsaday inay la socdaan bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee talo-bixinta safarada.
Xigasho/kilde: Coronatiltak: Norge kommer til å stenge flyplasser og havner.
Previous articleTurkish Airlines oo joojisay duulimaadyada Norway iyo Turkiga.
Next articleFHI: 33% dadka caabuqa Corona laga helay, waxey ka dhex qaadeen Norway gudaheeda.